Sina TANDREMO NY CHARGERS PHONE MAHARITRA China ary mpamokatra | APS
TANDREMO ireo mpiantso finday mampidi-doza
Nitranga tamintsika rehetra io. Mivoaka sy mivoaka ianao ary mahatsapa fa mihena ny telefaoninao. Matetika indrindra rehefa mandeha ianao. Ny faritra miandry ny seranam-piara-manidina matetika dia misy andiana mpifindrafindra monina manodidina ny toeram-pivoahana sy ny herinaratra.
Mampalahelo fa ny fisolokiana antsoina hoe "jacking juice" dia mampidi-doza ny famandrihana ny telefaona na ny takelakao. Ny famonoana jus dia mitranga rehefa tratry ny malware ny seranan-tsambo USB na tariby. Rehefa tafiditra ao anaty tariby na seranana voan'ny aretina ianao dia tafiditra ao ireo mpisoloky. Misy karazany roa ny fandrahonana. Ny iray dia ny halatra angon-drakitra, ary izany no toa azy. Ampidiro amina seranana na tariby simba ianao ary azo angalarina ny teny miafinao na ny angona hafa. Ny faharoa dia ny fametrahana malware. Rehefa mifandray amin'ny seranana na tariby ianao dia apetraka ao amin'ny fitaovanao ny malware. Na dia aorinao aza ny fikatsoany dia hijanona eo amin'ilay fitaovana ny malware mandra-panaisanao azy.
Hatreto aloha dia toa tsy fanao efa niely be intsony ny famonoana ranom-boankazo. Ny vondrona mpijirika ny Wall of Sheep dia nanaporofo fa azo atao izany, ka tokony hitandrina ny besinimaro - indrindra fa toa tsy mampidi-doza ny tariby USB.
Ahoana no ahafahanao miaro tena?
1.Take anao manokana Wall lovia ary car chargers with you when you’re traveling.
2.Aza mampiasa tady hita eny amin'ny toeram-bahoaka.
3.Mampiasà Charger Wall, fa tsy tobim-pandefasana USB, raha ambany ny telefaoninao.
4.Mampiasà vola amin'ny backup misy bateria azo entina ary avelao ho voampanga izy raha sendra vonjy maika.
5. Manaova fampiharana anti-malware toy ny Malwarebytes amin'ny fitaovanao ary mandehana scan tsy tapaka.
plug Adatpter Pcba , Fast Niandraikitra Car Charger miaraka Cable , Fast Niandraikitra PCB Desgin , USB adaptatera , Desgined USB Charger , Mobile Charger ,